Madheshvani : The voice of Madhesh - राजविराजको अवस्था भयावह छ, सचेत होऔं : नगरप्रमुख
राजविराजको अवस्था भयावह छ, सचेत होऔं : नगरप्रमुख
शम्भु प्रसाद यादव, नगरप्रमुख, राजविराज नगरपालिका, सप्तरी
० कोरोना भाइरसका कारण राजविराजमा एक जनाको मृत्यु भएपछि लकडाउन घोषणा गरिएको छ, कस्तो अवस्था छ ?
— अहिले राजविराजको अवस्था भयावह छ । मृतक संक्रमितको सम्पर्क आएका २२ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखाइसकेको छ । हामीले अझै पनि धेरै स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएका छौं । कोरोना रोकथामका लागि हामीले अनिश्चितकालीन लकडाउन घोषणा गरेका छौं । सुरुदेखि नै हामीले सतर्कता अपनाउँदै आएका छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कुनै त्रुटि भएको छैन । सीमा पारीबाट आउने मान्छेहरुबो सीमा सुरक्षाकर्मीहरुले वार्ड अध्यक्षलाई फोन गर्ने गरेको थियो । तर, जुन संक्रमितको मृत्यु भयो उहाँ भारतबाट कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भएन । यसको सबभन्दा बढी दोषी उहाँका छिमेकीहरु हुन् । भारतबाट आएका छन् भन्ने कुरा कम्तीमा त्यहाँका छिमेकीहरुले हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने थियो । कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्ति लकडाउनभन्दा पहिला नै आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागि भारत जानुभएको थियो । उहाँ नेपाल आएको १० दिनपछि विरामी पर्नुभयो, त्यसपछि उपचारका लागि धरान जानुभयो । त्यसपछि उहाँको निधन भयो त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो ।
० संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुमा पनि कोरोना पोजिटिभ आएको छ, उहाँहरुको अवस्था कस्तो छ त ?
— मृतक संक्रमितबाट संक्रमित भएकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ । उहाँको श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य नै छ । तर, उहाँको उमेरले गर्दा पनि मृत्यु भएको होला । उहाँको उमेर ७० नाघिसकेको थियो । उहाँ पहिला पनि दुई चार किसिमका रोगहरुबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो । उहाँका सम्पर्कमा आएकाहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ ।
० विदेशबाट आउनेहरुका लागि नगरपालिकाले कस्तो व्यवस्थापन मिलाएको छ ?
— भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउनेहरुका लागि नगरपालिकाले तीन चार वटा क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । एउटा क्वारेन्टाइनमा तीन चार सय जना बसेका छन् । सप्तरी जिल्लामा सबैभन्दा ठूला आइसोलेसन राजविराजमै छ कृष्णा मेडिकल कलेजमा । त्यहाँ भरिका सबै बस्छन् ।
० लकडाउनलाई पूर्णरुपमा पालना गराउन नगरपालिकाले राहतका के कस्ता व्यवस्थाहरु गरेको छ ?
— हामीले भन्न त अनिश्चितकालका लागि लकडाउन भनेका छौं तर एक हप्ताभित्र कस्तो अवस्था रहन्छ त्यसपछि पुनः नयाँ निर्देशन जारी गर्छौं । नगरपालिकाभित्र सम्भावित क्षेत्रहरुमा व्यापक स्वाब परीक्षण गरी त्यसपछि कस्तो परिणाम आउँछ, त्यसलाई हेरेर नै केही निर्णय हुन्छ । लकडाउन पूर्णरुपमा पालना गर्नका लागि हामीले नगरवासीलाई आह्वान पनि गरेका छौं । यो लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न तथा अति आवश्यक वस्तुको समस्या हुँदैन । दैनिक मजदुरी ज्यालादारी गर्नेहरुलाई खासै समस्या हुँदैन । किनभने अहिले खेती गर्ने समय आएको छ, रोपाइमा व्यस्त छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा मधेशमा साउन १५ सम्म कुनै किसान, मजदुर बेरोजगार छैन । अहिले खेत रोपाइँका लागि मजदुर पाउन मुश्किल छ । राजविराज नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउन छैन, शहरी क्षेत्रमा मात्रै लकडाउन छ ।
० बढी जोखिम रहेको ठाउँहरुमा लकडाउन कतिको पालना भइरहेका छन् ?
— वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि यहाँका जनता एकदम सचेत छन् । हामीले घोषणा गरेको लकडाउन पूर्णरुपमा यहाँका जनताले पालना गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसमा जनताको पूर्ण समर्थन रहेको छ । हामीले पीसीआर टेस्ट पनि तीव्र बनाएका छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार लकडाउन पालना भइरहेको छ ।
० राजविराजमा कोरोना समुदायस्तरमा प्रवेश गरेको हो त ?
— यहाँ कोरोना निश्चितरुपमा नै समुदायस्तरमा प्रवेश गरिसकेको छ । मृतकको परिवारबाहेक १७ जना कोरोना पोजिटिभ देखाउँदा हामीले स्वीकार्नैपर्छ कि कोरोना समुदायस्तरमा प्रवेश ग¥यो ।
० कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसक्यो भनेको छ, त्यसबाट राजविराज नगरपालिकामा कति आयो ?
— संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा एक सुको पनि आएको छैन । प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म राहतको नाममा १५ लाख मात्र आएको छ । संघीय सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च ग¥यो, कसरी कोरोना नियन्त्रण ग¥यो हामीलाई केही थाहा छैन । प्रत्येक दिन संघीय सरकारले फ्याक्समार्फत् निर्देशनमात्रै पठायो । एक रुपैयाँ पनि कुनै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पठाएको छैन । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई चिठ्ठी पठाएर निर्देशन दिने काम मात्रै गरेको छ । अरु केही गरेको छैन ।
० कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका युवाहरुलाई स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
— वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुका लागि नगरपालिकाभित्र धेरै अवसरहरु छन् । हामीले कुनै काम गर्दा भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारबाट आएकाहरुका लागि त स्वतः अवसरहरु छन् । यहाँ कृषिमा पनि त्यतिकै सम्भावनाहरु छन् । नेपालीहरुले जति पसिना र श्रम विदेशमा गर्छ त्यति काम राजविराज नगरपालिका भित्र ग¥यो भने विदेशभन्दा बढी रुपैयाँ कमाउँछन् । आफ्नै ठाउँमा काम गर्न यहाँका मान्छेहरुलाई लाग्छ । नेपालको सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो कि आफ्नो ठाउँमा अवसर हुँदाहुँदै विदेशमा जान रुचाउँछन् । यसमा मानसिकतामा समस्या छ । नेपालीहरु आफ्नो देश बनाउन लाज मान्छन्, तर त्यहीं काम विदेशमा गएर गर्छन् ।